Munaasabad sagootin ah oo la sameeyey gabdhaha Kubada Koleyga ee Gobolka Banaadir. | Baydhabo Online
Munaasabad sagootin ah oo la sameeyey gabdhaha Kubada Koleyga ee Gobolka Banaadir.
Kulankan sagootinta ah uu Mamaulka Gobalka Banaadir u sameeyay Gabdhaha kubada Koleyga ee Gobalka Banaadir kuwaas oo ka qeyb gali doono tartanka Kubada Koleyga Gabdhaha ee Maamul goabaledyada dalka kaas oo lagu wado in maalmaha soo socdo uu ka furmo Magaalada Garoowe ee Xarunta Dowlad Gobaledka Puntuland.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Gudoomiyaha Gobalka Banaadair ahna Duqa Magaalada Muqdisho , Ururka Haweenka Gobalka Banaadir iyo Tababarayaal, waxa uuna kulankan ahaay dhiira galin iyo bagoodin loo sameynaayey gabdhaha Kubada Koleyga Gobalka Banaadir.
Gudoomiyaha Ciyaaraha Gobalka Banaadir Xasan Adan Yabarow Wiish oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in Ciyaartoydan Gabdhaha Kubada koleyga ay yihiin kuwa tayo leh oo la soo xulay.
“ Juhdi badan ayaa lagu bixiyay gabdhahaan waan la soo xulay waxa aan ka sugeyno waa in ay guul keenaan waana kuraja weynahay taas Gudoomiye adna waan kaaga mahad celineynaa sida aad garabka u siiso markaste Sportska”
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xusen Jimcaale Madaale ayaa gabdhaha kubada koleyga ee Gobalka Banaadir u balan qaaday abaalmarino hadii ay guul soo hoyden.
“Waxaan rabnaa in aad madaxeyna kor u qaadan waxaana idin balan qaadaa hadii aad guuleysataan in aan idin ku abaal mariyo abaal marino ka qaalisan kuwa aad halkaasi ka soo qaadan”
Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka ayaa bila kahor lagu soo gabagabeeyay Tartanka Kubada Cagta ee Mamaul gobaledyada dalka oo ay ku guulesatay Puntuland iyadoo haatan la filaayo in maalmo kadib Magaalada garoowe uu ka furmo tartanka kubada koleyga gabdha Maamul gobaleedyada dalka,